सात बिगाहा गहुँबाली सखाप | Suvadin !
Apr 15, 2019 14:47
परासी, बैशाख २ - पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका दुई स्थानमा आइतबार दिउँसो आगलागी हुँदा करिब ७ बिगाहामा लगाइएको गहुँबाली जलेर नष्ट भएको छ। किसानले भित्राउन लागेको गहुँबाली जलेर नष्ट हुँदा करिब ६ लाख बढीको क्षति भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
आगलागीका कारण पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ३ मा पर्ने कुस्मा गाउँमा लगाइएको करिब साढे ३ बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाइएको गहुँबाली नष्ट भएको छ। उक्त क्षेत्रफलमा लगाइएको बाली १० जना किसानको हो ।
त्यसैगरी पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ को लोहरौलीमा आगलागी हुँदा ३ बिगाहा १८ कट्ठा गहुँबाली जलेर नष्ट भएको छ। उक्त क्षेत्रफलमा २० जना किसानले बाली लगाएका थिए।
अन्य किसानले काटिसकेको गहुँको नलमा आगो लगाउने क्रममा आगलागी भएको हो। नलमा आगो लगाएको बखत हावा आएको थियो । सोही क्रममा आगो गहुँबालीमा सल्केको प्रहरीले जनाएको छ।
खेत मलिलो हुने भन्दै तराई क्षेत्रमा गहुँ काटेपछि नलमा आगो लगाउने चलन छ । आगलागी पश्चात रामग्राम नगरपालिकाको दमकल नियन्त्रणका लागि पुगेको थियो। ठूलो क्षेत्रफलमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न दमकललाई मुस्किल भएको थियो ।
लगत्तै अर्को स्थानमा आगलागी भएपछि दमकल पुग्न सकेको थिएन। आगलागी भएलगत्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक गुप्ता किसानहरूलाई आश्वासन दिन पुगेका थिए। त्यस क्रममा गुप्ताले किसानहरूलाई निःशुल्क बिऊ, बिजन र मलखादसहित अन्य सहयोगका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आगलागीले ठूलो क्षति हुने गरेको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले दमकल खरिद गर्नका लागि गाउँपालिकाले तत्काल पहल गर्ने बताए ।
पश्चिम नवलपरासीमा रामग्राम नगरपालिकामा मात्र एउटा दमकल छ । सात स्थानीय तहमध्ये अन्य पालिकामा दमकल छैन। जसका कारण आगलागी हुँदा हरेक वर्ष जिल्लामा ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको छ।